Vizrt Group waxay shaqaalaysiisaa Daniel Url si loo xoojiyo diiradda macaamiisha ee Horumarinta Wax soo saarka | NAB Show News | 2020 NAB Show Iskaashatada Warbaahinta iyo Soosaaraha NAB Show LIVE. Warka Injineeriyada ee Warbaahinta
Bogga ugu weyn » Featured » Vizrt Group waxay shaqaalaysiisaa Daniel Url si loo xoojiyo diiradda macaamiisha ee Hormarinta Wax soo saarka
Vizrt Kooxda ayaa maanta ku dhawaaqday in Daniel Url uu ku biiray shirkadda isagoo ah Madaxa Maareynta Maareynta Alaabada ee Michael Hallén, Madaxa Kooxda iyo Madaxweynaha.
Vizrt Group waa urur udub dhexaad u ah ujeedada la sheegay ee ah ka caawinta sheekooyinka adduunka soo gudbinta sheekooyin badan, si fiican ayaa loo sheegay. Daniel wuxuu ahaa Maamulaha Guud iyo Madaxa Sarkaalka Iibka ee Qvest Media in ka badan 11 sano isagoo kormeerayay iibinta mashruuca oo ay ku jiraan rakibidda Vizrt alaabooyinka Sky Sports Munich, ORF Vienna, Nine Network Sydney, iyo kuwa kale oo badan.
Iyada oo leh aasaas adag oo ku saabsan horumarinta wax soo saarka tiknoolajiyada warbaahinta, shaqooyinka wax soo saarka, iyo iibinta, Daniel wuxuu hubin doonaa in astaamaha Kooxda; NewTek, Vizrt, iyo NDI®, waxay keeneysaa tabo cusub oo suuq ah oo sii ahaanaya mid ku wajahan natiijada macaamiisha. Warbaahinta Qvest, sida had iyo jeer, waxay wali tahay lamaane muhiim ah Vizrt.
Daniel Url ayaa sheegay, Waxaan ahaa qof jecel Vizrt sanado badan iyo sida aaminka ah awooda softiweerka, IP, iyo teknolojiyada daruuraha si loo badalo habka aduunku ula wadaago sheekooyinkiisa si ka wanaagsan. Kama fikiri karo meel fiican oo aan joogo. ”
Url iyo kooxaha Maareynta Wax soo saarka waxay si dhow ula shaqeyn doonaan howlaha R&D oo uu hogaaminayo Dr. Andrew Cross, Madaxweynaha R&D for Vizrt Kooxda, sameynta awoodda kobcinta wax soo saarka Kooxda. Marka la isku daro, labada lamaane waxay sare u qaadi doonaan diiradda saarista gudbinta qiimaha macaamiisha iyagoo hal-abuurnimo ugu sameynaya wax soo saar iyo khibrad si kooxdu ay usii wadato diiradda macaamiisha.
Michael Hallén, Agaasimaha Guud iyo Madaxweynaha ayaa sheegay, Waan ku faraxsanahay inaan awoodo inaan soo bandhigo khibrada iyo awooda Daniel Vizrt Qoyska kooxeed. Waxaan haynaa qorshayaal badan oo aad u xiiso badan oo mustaqbalka ah iyo xoojinta shaqadeena horumarinta wax soo saarka hab naga caawin doona inaan u adeegno macaamiisheenna, waxyaabaha ay ka kooban yihiinna ay udub dhexaad u yihiin tan. ”
Khibrada ballaaran ee Daniel ee macaamiisha diiradda saartay iyo fahamka ayaa xoojin doonta Vizrt Bixinta kooxda ee jiilka soo socda ee qalabka sheeko-soo-saarka muuqaalka ah ee barnaamijka lagu qeexay softiweer ee aan hadda ku xaddidnayn qalabka, taasoo u oggolaanaysa macaamiisha inay u sheegaan sheekooyinkooda, si ka wanaagsan.
Previous: Sawirada Pace waxay kudareysaa taabashada dhameystirka Mariah Carey's "Maalinta Badbaadi"
Next: Light Iron wuxuu balaariyaa xalalka cusub ee iskaashiga fog